သံသယ ၇ှင်းတမ်း | PoemsCorner
သံသယတွေမကျန်အောင်လို.ငါ့အတိတ်ကို နင်အကုန်တူးဆွလိုက်တာရလာဒ်က ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။
ခိုးပြီးငိုတဲ့သူကိုငါကဘယ်လို ဗြောင်ချော့ရမှာလဲငါလည်း ဘယ်လိုဖြေသိမ့်ရမှန်း မသိတော့ပါဘူးကွယ်။
သတိမရတော့ဘူးလို. ငါမငြင်းပါဘူးဒါအတွက်လည်း မင်းကိုမနာကျင်စေချင်တော့ပါဘူးလေ။
သားကောင်ကမုဆိုးကို သတိရတာမဟုတ်ပါဘူးနာကျင်မှုကို မမေ့နိုင်တာပါ။
မင်းဆီကို ၀ံ့ကြွားတဲ့ခြေလှမ်းနဲ.လာခဲ့သူမှ မဟုတ်တာပဲဖုန်တွေ သဲတွေ သွေးတွေနဲ.တောင်ပံတွေဒရွတ်ဆွဲဝင်လာခဲ့တာပဲသေချာပြုစု စောင့်ရှောက်ပြီးမှဒဏ်ရာရခဲ့ရကောင်းလားလို.ဒေါမနဿဖြစ်နေရင်ငါဘယ်လိုနေတတ်မှာလဲ။
ပါးပြင်ပေါ်က အမာရွတ်လေးကိုခဏခဏပွတ်သပ်နေသူအမာရွတ်ပေးခဲ့သူကို လွမ်းလို.လားချောမွေ.မှုကို ပြန်လိုချင်တာလားအဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါကွယ်။
သူ.ကိုတစ်ခါ သတိရတိုင်းစိတ်ထဲက မင်းကို ငါးခါတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဒါလည်း မင်းကို သတိရခြင်းတမျိုးမဟုတ်ဘူးလား။
မင်းအတွက်နဲ.ငါ့မှာနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ သတိရခြင်းကိုတောင်ငါမုန်းမိနေပြီလို. ပြောရင်မင်းပိုကြေကွဲမှာပါ။
တစ်ခုတည်းသော ငါပြောနိုင်တာကအသစ်ဖြစ်သောတစ်ခုကို နေရာအားလုံးပေးဖို.အဟောင်းကို အမြစ်ပါမကျန် ရှင်းနိုင်အောင်ငါအားထုတ်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။
အဖြစ်အပျက်တွေရဲ.အဆုံးသစ္စာတရားကို မေးခွန်းထုတ်ကြည့်မြူတစ်စိတ်စာတောင် မလျော.ခဲ့ဘူးအပ်တစ်ထောက်စာတောင် မပွန်းခဲ့ဘူးကျီးပေါင်းတက်သစ်ပင်မှာလည်းအသန်.စင်ဆုံး ပန်းတစ်ပွင့် သိမ်းဝှက်ထားနိုင်တာနည်းနည်းလေး ယုံပေးပါ။
နင်လည်း ခိုးမငိုပါနဲ.တော.ငါလည်း ခိုးသတိမရတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးအကြိမ် အားရအောင်ငိုပစ်လိုက်ပြီးငါ့ရင်ခွင်မှာ ပါးအပ် သက်ပြင်းလေးချအသစ်သောဘ၀ကို “စ” ရအောင်။ ။
In: စကားပြေ Posted By: Khinchawsu Date: Aug 25, 2011
သံသယ လမ်းခွဲ (မိုးဇက်)
Leave comment5Comments & 610 views
အဖြစ်အပျက်တွေရဲ.အဆုံးသစ္စာတရားကို မေးခွန်းထုတ်ကြည့်မြူတစ်စိတ်စာတောင် မလျော.ခဲ့ဘူးအပ်တစ်ထောက်စာတောင် မပွန်းခဲ့ဘူးကျီးပေါင်းတက်သစ်ပင်မှာလည်းအသန်.စင်ဆုံး ပန်းတစ်ပွင့် သိမ်းဝှက်ထားနိုင်တာနည်းနည်းလေး ယုံပေးပါ
By: yelaylover2010 at Aug 25, 2011
င်လည်း ခိုးမငိုပါနဲ.တော.ငါလည်း ခိုးသတိမရတော့ပါဘူးနောက်ဆုံးအကြိမ် အားရအောင်ငိုပစ်လိုက်ပြီးငါ့ရင်ခွင်မှာ ပါးအပ် သက်ပြင်းလေးချအသစ်သောဘ၀ကို “စ” ရအောင်။ ။
By: ဆည်းဆာ at Aug 25, 2011
“thu ko 1 khar ta ti ya tine sate hte ka min ko5khar taung pan ke par de.”
tate p nar ma le bu phyit nay de,fri.
kha na kha na,,,tay tay char char phat par de.
u mean u have bf (2) at the same time pop naw.
e loh pyaw tar lar?
By: ei lay at Aug 26, 2011
ပါးပြင်ပေါ်က အမာရွတ်လေးကိုခဏခဏပွတ်သပ်နေသူအမာရွတ်ပေးခဲ့သူကို လွမ်းလို.လားချောမွေ.မှုကို ပြန်လိုချင်တာလားအဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပါကွယ်။”
ကြိုက်တယ်…. ဖတ်လို့ကောင်းတယ်…. အားပေးနေမယ်….
By: Pyae at Dec 14, 2011
ma soe par buu .taw taw lay phat pe nar lal ag loat ya tal………but like******
By: shwe sin at Jul 29, 2012